अनि डुंगा खियाउन थालें- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
'मेरा कोही रोलान् भन्ने छैन, कोही कराउलान् भन्ने छैन । आफू मरिहालिन्छ । मान्छेहरु रोएको/नरोएको नदेखेपछि मतलब हुने कुरा पनि भएन !'
'अहिले छालको सिजन छ । हावाहुरीको सिजन छ । झ्याप्पै छाल आयो भने के गरौं, कसो गरौं हुन्छ । अहिले बिहान–बेलुका छाक टार्न एकछिन्–एकछिन् डुंगा चलाउँछु ।'
फाल्गुन २२, २०७७ हस्तमाया विक
त्यसबेला बाहिरबाट आएर डुंगा चलाउने महिला म मात्रै थिएँ । केही स्थानीय महिलाले त चलाउँथे नै । आफ्नो डुंगा हुनेहरू आफैँ चलाउँछन् । म साहुकै डुंगा चलाउँछु । सुरुमा दिदीको छोराछोरीकै डुंगा चलाए । उसबेला दिनमा ८–९ सय रुपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो । चलाउन जानेपछि अरू साहुको पनि चलाएँ । कुनै बेला मन धरधरी रुँदा पनि डुंगा चलाइयो ।
आफ्नो कोही भइदिएदेखि मैले यस्तो दुःख गर्नुपर्ने थिएन होला भन्ने सोचेर पनि आँसु पनि आउँथ्यो । काम नगरी पनि भएन, खानुपरेको छ । कुनै बेला रोएर पनि डुंगा चलाइयो, कुनै बेला हाँसेर पनि डुंगा चलाइयो । बुबा–आमा भइदिएको भए ‘छोरी यतिखेर भोकाइ होली’ भन्थे होलान्, खाना लिएर आउँथे होलान् । खाना, खाजा लिएर आउने बुबा–आमा भइदिएको भए म पनि आफ्ना सबै दुःख बिर्सिन्थें होला ।
डुंगा चलाउँदा सिजनमा एकै दिनमा १५ सयसम्म कमाएको छु । अझै पनि महिला चालक देखेपछि यात्रु चढ्न डराउँछन् । महिलासँग हामी जाँदैनौं भन्छन् । यात्रुहरू पुरुष चालक नै खोज्छन् । हामीले डुंगामा चढाइसकेका मान्छे पनि महिलासँग जाँदैनौं भनेर ओर्लिन्छन् । तिनीहरू नगए अरू भेटिन्छन् भन्ने आस हुन्छ । कहिल्यै डुंगा नचढेकाहरू पहिलोपल्ट चढ्दा चालक महिला पर्‍यो भनेर झन् डराउँछन् ।
टिकट हातमा लिइसकेका हुन्छन्, डुंगामा चढिसकेका हुन्छन् । हामीलाई देखेपछि ‘महिलासँग जाँदैनौं’ भनेर टिकट फिर्ता गर्छन् । र, पुरुष खोजेर जान्छन् । महिलासँग जान्नौं भन्दा साह्रै नरमाइलो लाग्छ । कसैकसैलाई मैले भनेको पनि छु, ‘तिमीहरू केटा मान्छेले जन्माएर आएका हौ ? तिमीहरूलाई आमाले पाएको होइन, बाउले मात्रै पाएका हुन् ?’ महिलालाई विश्वास नगर्दा भित्रैदेखि मन दुःख्छ । चढाएर लैजान ठिक्क परेको मान्छे ओर्लेर अर्को डुंगा चढ्दा मन असाध्यै तीतो हुन्छ ।
यहाँ तीसौं वर्षदेखि डुंगा चलाएरै जीविका चलाएका महिला छन् । मैले डुंगा चलाउने लाइसेन्स नै बनाएको छु । यत्तिका वर्ष भयो डुंगा चलाएको तर किन्न सकिएन । डुंगाको पैसा उतिबेलै ८–९ लाख रुपैयाँ पर्थ्यो । त्यो पैसाले दाल–भात खानै ठिक्क हुन्थ्यो । अहिले त १२ लाख रुपैयाँ दिन्छुभन्दा पनि डुंगा बेच्दैनन् । अनि रुट पनि किन्नुपर्छ । रुट किन्नै ७०–८० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यही पनि अहिले डुंगा व्यवसायी समितिले रुट दिनै बन्द गरेको छ ।
म एक्लैलाई मरुन्जेल काम गर्नुपरेको पनि छैन । कमाएको पैसाले यसो अलिकति गरगहना जोडियो, लगाइयो । एक्लो ज्यानलाई के सोच्नुपरेको छ र ! मरिहालिएछ भने यिनै दिदीका छोराछोरीले लगेर फाल्देलान् नि ! मेरा कोही रोलान् भन्ने छैन, कोही कराउलान् भन्ने छैन । आफू मरिहालिन्छ । मान्छेहरू रोएको/नरोएको आफ्नो आँखाले नदेखेपछि मतलब हुने कुरा पनि भएन !
मेरो दाहिने खुट्टामा समस्या छ । म अपांग पनि हुँ । गाउँमै हुँदा लडेर खुट्टा यस्तो भयो । हिँड्न अप्ठेरो हुन्छ । बिरामी परेर थला परिएछ भने यही जोडेको गहना बेच्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । रोगले भेटेन र थला परिनँ भने अझैं ५ वर्ष डुंगा चलाउँला/खाउँला ।
अहिले छालको सिजन छ । हावाहुरीको सिजन छ । झ्याप्पै छाल आयो भने के गरौं, कसो गरौं हुन्छ । अहिले बिहान–बेलुका छाक टार्न एकछिन्–एकछिन् डुंगा चलाउँछु । बाँकी समय बाराहीघाटको चौतारीमा बसेर पानी बेच्छु । पहिले–पहिले विदेशी यात्रु चढेका बेला टिप्स दिन्थे । अहिले विदेशी छैनन् । सुनसान छ फेवाताल । अहिले कोरोना महामारीले गर्दा मान्छे आउँदैनन् । व्यापार केही छैन । आयो चौतारो कुर्‍यो, फर्क्यो ! दिनमा २ सयको पनि व्यापार हुँदैन । आखिर पानी बेचेर के नै चल्छ र ! फेरि पनि चलाउने त डुंगै हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७७ ११:१५